Kedu otu esi agagharị na weebụ site na Linux? | Site na Linux
Kedu otu esi agagharị na weebụ site na Linux?
Maka ihe niile ndị na-achọ ịmata banyere ọnụ na Linux ma ọ bụ maka ndị jụrụ ajụjụ nke "Ọ ga-ekwe omume ịchọgharị na weebụ site na njedebe na Linux", Anyị nwere ike ịsị ee, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ma ọ ga-ekwe omume ogologo oge.
Mgbe ahụ, ha ga-eche, n'ihi na ọ bụghị ihe a na-adị kwa ụbọchị taa, azịza ya dị mfe, n'ihi na, dị ka sistemụ arụmọrụ si malite, na-enyere ọtụtụ onye ọrụ aka ịme ihe, ọ bụ otu ihe ahụ maka ihe nchọgharị na ngwa ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na nke izizi na nkesa Linux dị ugbu a ọ gaghị ekwe omume iji ọnụ gị dị ka ihe nchọgharị weebụ maka naanị ihe kpatara ị chọrọ "ihe nchọgharị weebụ".
Ya mere, anyị ga-ahụ nwụnye na ojiji nke Lynx nke bụ ihe nchọgharị na-arụ ọrụ ederede na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ yiri Unix, yana na usoro iwu MS-Dos.
Ọ dị afọ iri abụọ na isii ma ọ bụ ugbu a ihe nchọgharị weebụ kacha ochie ka na-arụsi ọrụ ike.
Ọ bụ ezie na Lynx na-ada ụda na-enweghị isi na nke ochie, ọ na-abata na kemfe, ọkachasị mgbe ị na-arụ ọrụ na sava Linux dịpụrụ adịpụ ma ị nweghị ohere GUI, ha kwesiri ịme ihe ole na ole.
Emebere ihe nchọgharị weebụ Lynx na ndabara na nkesa Linux ọ bụla dịka anyị maara. Maka nke a, anyị ga - etinye ya na nkesa Linux anyị.
1 Wụnye Lynx na nkesa Linux dị iche iche
2 Nhazi ojiji nke Lynx
Wụnye Lynx na nkesa Linux dị iche iche
Ebe Lynx bụ ihe nchọgharị a ma ama na ọtụtụ afọ nkwado, ọtụtụ nkesa Linux nwere ngwugwu a na nchekwa ha.
Iji mee nhazi ziri ezi nke Lynx na Debian, Ubuntu na nkesa ọ bụla ọzọ sitere na ndị a, anyị ga-emepe ọnụ na ya ka anyị ga-eme iwu na-esonụ:
N'okwu nke Ndị ọrụ nke Arch Linux, Manjaro, Antergos na sistemụ ọ bụla ọzọ sitere na nke a, nwere ike iwunye iwu a:
N'ihe banyere Fedora, RHEL, CentOS ma ọ bụ usoro ọ bụla ewepụtara n'ime ndị a, iwu nke ha ga-eji wụnye Lynx bụ:
N'ikpeazụ, maka ndị na-eji ụdị ọ bụla nke OpenSUSE, ha ga-enwe ike ịwụnye ihe nchọgharị a site n'enyemaka nke iwu na-esonụ:
Nhazi ojiji nke Lynx
Ebe ọ bụ na ihe nchọgharị Lynx bụ usoro iwu nyere, a na-emepe ibe weebụ niile site na ịkọwapụta URL ahụ n'ọdịnihu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga google, ịkọwapụta ya na iwu ndị a:
Ihe nchọgharị weebụ nke Lynx bụ isi ụzọ mkpirisi igodo. Yabụ maka iji ha, anyị ga-amalite iji ha mara ha.
Ka anyi tulee ha nkenke, ebe ha gha eme ka ihe ichoghari na ihe ngbanwe karie.
Iji malite, Ọ bụrụ na ha chọrọ ịhapụ weebụsaịtị ị nọ na ya wee chọọ ịga nke ọhụrụ, ha ga-pịa mkpụrụedemede G na keyboard.
O Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịlaghachi otu ibe, pịa igodo aka ekpe na keyboard. Iji soro njikọ, pịa igodo akụ ziri ezi.
Rollinggagharị na ihe nchọgharị weebụ Lynx yiri ọtụtụ ngwa nchọgharị ọgbara ọhụrụ na ahịa taa.
Iji ịnyagharịa na peeji nke, pịa igodo Down na kiiboodu wee pịa elu iji bulie ibe ahụ.
Ugbu a okwu pụrụ iche, bụ ozi egosiputara mgbe ị gara na weebụsaịtị, nke ọtụtụ oge ugbu a na-agwa gị maka iji kuki na ndị ọzọ.
Nke a nwere ike iju ọtụtụ ndị anya, mana ọ bụ naanị ịpị igodo A.
Ihe nchọgharị Lynx bara uru mana ọ gbagwojuru anya maka ọtụtụ ndị ọrụ anaghị eji ụdị nchọgharị Internetntanetị ederede.
N'ụzọ dị mma, usoro ihe omume ahụ nwere akwụkwọ ntuziaka zuru ezu nke na-akọwa akụkụ niile nke ihe nchọgharị ahụ.
Ele Lynx ntuziaka na ọnụ, na-agba ndị na-esonụ iwu:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Kedu otu esi agagharị na weebụ site na Linux?
Ọ bụ ezie na lynx bara uru, achọrọ m njikọ,
njikọ2 na elinks. Ọbụna w3m
Utu aha Victor: Igwe101 dijo
Nne a na-emejọ mma, m tinyere nkọwa a na lynx, XD
Zaghachi Victor utu aha: Machine101
Nkesa GNU / Linux maka obodo sayensị